Ama-50 eentombi eziDibeneyo zeCuban Ikhonkco licela uxolo kuVivica A. Fox (NGAPHAMBILI) - Inkcubeko Yopopu
Ama-50 eentombi eziDibeneyo zeCuban Ikhonkco licela uxolo kuVivica A. Fox ngaphezulu kweNgcaciso yeendaba zeNtlalo.
Ividiyo kude khwezi
UKUHLAZIYIWE 5/31, 2:01 pm ET: UVivica A. Fox kunye neCuba Link bathengisa amagqabantshintshi malunga nodliwanondlebe lukaVivicas kubudlelwane bakhe bangaphambili ne-50 Cent, bezisa izinto ngentlonelo.
ICuban Link yathatha u-Twitter kule mpelaveki emva kokuba uVivica ethumele iifoto zakhe kunye ne-50-isoka laseCuba- kwi-Instagram, ebhala ukuba kukuyeka ukuya exesheni.
Yall, how to Pooh shiesty song go again? .. Umama wam ebesoloko endixelela ukuba ndihlale ngaphandle kweshishini labantu abadala [ubuso-besundu emoji] ndibone endikwenzileyo .. [ivayolini emoji] smh.
Kungekudala emva kokuba i-emoji ye-violin ivelile, uVivica wacacisa izimvo zakhe kwaye wathumela ezinye izinto ezivela kudliwanondlebe lwe-DJ Vlad kwi-Instagram, apho wabiza khona intle yaseCuba kwaye wathi uyonwabile i-50. Njengombhalo-magama, wabhala ukuba wayengafanelekanga ukuba abe ne-violin! (leyo yayintle) bendikunika iintyatyambo ziqaqambe! Ukuqenelela okuhle kakhulu! NGOKU! Masiqhubeke sonke!
uninzi lwezikhombisi kumdlalo
ICuba ke yona yaphendula kwingcaciso kungekudala emva koko, yabhala ukuba iyaxolisa kwaye ibekek 'ityala ngayo yonke le mbambano.
Jonga ibali lokuqala apha ngezantsi:
Kudliwanondlebe lwakutsha nje no-DJ Vlad, uVivica A. Fox wabonakalisa ubudlelwane bakhe ne-50 Cent, embiza ngokuba luthando lobomi bam-kwaye hayi okokuqala.
Umdlali weqonga kunye nommeleli we-rap ngo-2003, kwaye nangona bohlukene esidlangalaleni, uthi usamkhathalele phantse amashumi amabini eminyaka kamva. Mnumzana onjalo, unesisa kakhulu. Ndiyamazi njengoCurtis, uya kuhlala esenza njalo, utshilo uFox, echaza indlela awayegcwalisa ngayo indlu yakhe ngeentyatyambo ngomhla wakhe wokuzalwa xa babeqala ukuthandana. Yintoni eyabulala ubudlelwane kukuba wejust uhambe ngendlela yoluntu kakhulu ngokukhawuleza okukhulu, uqhubeke. Uthando endandinalo ngaye kwaye nangoku. … Wayeluthando lobomi bam, ndiyakuvuma ukuba ngaphandle kwamathandabuzo. Uya kuhlala enendawo ekhethekileyo entliziyweni yam.
Iresiphi yokuzinza eqanduselwa cream
Ngexesha elinye, wathi, uFif wayeza kumphakamisa nge-12-carat ring. Uye wandicaphukisa wayijika yamacici, wahleka. Ulwalamano lwahlukana emva kweeMbasa zoMculo zeHlabathi. Ndabuya ke wabe ese radio esithi undilahlile. Xa umhlobo wakhe wambiza ukuba abuyisele ukuba i-50 Cent yathi bahlukana, uFox waphendula wathi, Senze? Huh. Ke akazange atsho buqu, sisisongelo sayo. … Sasithandana kakhulu ngela xesha.
Ngaphandle kwendlela ephele ngayo, i Usuku lwenkululeko kwaye Bulala iBhili i-starsaid, bepholile ngoku, uxolo.
Emva kokubamba umoya wento eyayiza kuthethwa nguFox, intombi engama-50 eentombi eCuban Link yagqiba ekubeni iye kungena.
Ukuthumela kwicandelo lamagqabantshintshi kwisithuba esivela kwiGumbi loMthunzi, uCuban ubhale, Awwww ecaleni kwe-violin emoji kunye nobuso obuncumileyo obujikelezwe ziintliziyo.
Ikhonkco leCuba liye lathandana ne-50 Cent ukusukela ubuncinci kwi-2019.
UFox uphendule ngokufutshane emva kwakhe nge-Instagram Stories, ebhala, Kulungile! Oku kuya kuba kuhle ndizamile ukuthumela amaxesha ama-3 kwi @ShadeRoom. Ngoku, @_Cuban_Link, yintoni le kliphu ayibonisanga ukuba bendithe ngoku unentombazana eyintombazana & amp; Ndonwabile 4 yena! Ke hlala kwi-bagboodont yovalo! Ndilungile 🤑.
Iresiphi kathathu yetshokholethi ukusuka ekuqaleni
ndingazithengisa phi izihlangu kufutshane nam
Nini ukubeka icing kwikhekhe